Lisitr'ireo fampiharana sy fitaovana mahavariana ho an'ny Ubuntu / Linux | Avy amin'ny Linux
Lisitr'ireo fampiharana sy fitaovana mahavariana ho an'ny Ubuntu / Linux dia lisitra lehibe iray an'ny rindranasa, rindrambaiko, fitaovana ary fitaovana hafa ho an'ny Linux izay efa nosedraina avokoa tao amin'ny Ubuntu, angamba maro amin'izy ireo no afaka miasa amin'ny fizarana tianao indrindra.
Maro amin'ireo rindranasa ireo no efa noresahina teto Avy amin'ny Linux, Ny hafa vao nihaona tamin'izy ireo ary ny sasany kosa tsy afaka nanoratra lahatsoratra amin'ny antsipiriany momba ireo rindranasa ireo, fa manomboka androany dia manolo-tena hanoratra momba azy ireo izahay. Ity lisitra ity dia havaozina tsy an-kijanona, manampy ireo rindranasa omenao anay sy ny olon-kafa azonay andrana sy atoro anao.
1 Fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.1 Fampiharana am-peo ho an'ny Ubuntu / Linux
1.2 Chat Clients ho an'ny Ubuntu / Linux
1.3 Fampiharana backup sy fanarenana data ho an'ny Ubuntu / Linux
1.4 Fampiharana sy fitaovana ho an'ny fanaingoana ny birao Ubuntu / Linux
1.5 Tontolo iainana desktop ho an'ny Ubuntu / Linux
1.6 Fitaovana fampiharana sy fampandrosoana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.7 E-Book Utilities ho an'ny Ubuntu / Linux
1.8 Mpanonta ho an'ny Ubuntu / Linux
1.9 Fitaovana fampianarana sy fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.10 Fampiharana mailaka / mailaka sy fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.11 Mpitantana rakitra ho an'ny Ubuntu / Linux
1.12 Lalao ho an'ny Ubuntu / Linux
1.13 Fampiharana sary sy fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.14 Fampiharana sy fitaovana amin'ny Internet ho an'ny Ubuntu / Linux
1.15 Fampiharana sy fitaovana fampitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.16 Fampitaovana sy fitaovana fiarovana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.17 Fampiharana sy fitaovana hizarana rakitra ao amin'ny Ubuntu / Linux
1.18 Terminal ho an'ny Ubuntu / Linux
1.19 Fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.20 Fitaovana horonan-tsary sy fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
1.21 Mpitantana varavarankely ho an'ny Ubuntu / Linux
1.22 Fampiharana sy fitaovana hafa ho an'ny Ubuntu / Linux
Fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
Fampiharana am-peo ho an'ny Ubuntu / Linux
Fotoana: Izy io dia rindrambaiko haino aman-jery misokatra ho an'ny fandaharana sy fitantanana gara lavitra.
Ardor: Mamela ny firaketana, ny fanovana ary ny fampifangaroana ao amin'ny Linux. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba mafana fo ary:
Ardor 3 - modely amponga 16-track
Audacious: Izy io dia mpilalao audio open source, mamela anao hilalao ny mozika ianao nefa tsy mandany loharano betsaka amin'ny solosainao.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Audacious ary:
Audious: Mozika miaraka amin'ny Style
Fahamarinana: Izy io dia rindrambaiko malalaka, multiplatform ary loharano misokatra izay ahafahanao manoratra sy manova feo.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba sahy ary:
Fahamarinana sy TBRG
Hatsarao (somary) ny fisehoan'ny Audacity
Audio Recorder: Izy io dia mpitam-peo tsotra izay misy ao amin'ny Ubuntu PPA.
Clementine: Milalaova endrika audio maro tsy misy fatiantoka kalitao. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Clementine ary:
Tonga i Clementine 1.0!
Clementine 1.0 sy ny fikarohana manerantany
Clementine: Alternative solid ho an'i Amarok
Ahoana ny fametrahana an'i Clementine ho mpilalao mozika tianao ao Ubuntu
Ampidiro ny Clementine 1.2, miaraka amin'ny fanatsarana sy fanovana vaovao!
Cantata vs Amarok vs Clementine, ady mavesatra
Mpilalao Destokp Google Play Music: Mpanjifa Desktop tsy misy ifandraisany amin'ny sehatra Cross-platform hilalao mozika avy Mozika Google Play.
hydrogène: Masinina amponga mandroso ho an'ny GNU / Linux izy io.
KXStudio: Izy io dia fitambarana fampiharana sy plugins ho an'ny famokarana feo matihanina.
K3b: Fitaovana sary feno amin'ny fandoroana CD / DVD izy io ary hamarinina ho an'ny KDE.
Kid3Qt: Ahafahanao mitantana sy mametaka ny mozikao, ohatra, ny mpanakanto, rakikira, taona ary karazana karazana rakitra MP3 rehetra ao anaty rakikira.
Andao hanao mozika: Ahafahanao manao mozika amin'ny solo-sainao amin'ny alàlan'ny famoronana feon-kira sy gadona, azonao atao ny mamolavola sy mifangaro feo, ary koa mandamina santionany sy endri-javatra maro hafa.
Mixxx: Fitaovana DJ open source, manome izay ilainao rehetra hanaovana fampifangaroana mivantana, safidy tsara indrindra Traktor.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Mixxx ary:
SoundJuicer: Fitaovana iray ahafahanao mamoaka làlana audio, amin'ny fomba mitovy, manana cloner sy CD player izy.
Tomahawk: Mpilalao mahay mamela anao hilalao streaming, mozika alaina, mozika ao anaty rahona ( SoundCloud, Spotify, Beats, YouTube ankoatry ny hafa), playlists, radio ary maro hafa. Izy io koa dia manana fidirana amin'ny tambajotra sosialy, ankoatry ny famelana antsika hifandray amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny Gtalk sy Jabber.
Chat Clients ho an'ny Ubuntu / Linux
GhettoSkype: Mpanjifa Chat open source ho an'ny Skype.
HexChat: Izy io dia mpanjifa IRC mifototra amin'ny X-Chat, fa tsy toy ny X-Chat dia maimaim-poana tanteraka ho an'ny rafitra Windows sy Unix.
Messenger ho an'ny Desktop: Fampiharana ho an'ny Facebook messenger.
Pidgin: Ny mpanjifan'ny chat manerantany. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Pidgin ary:
Resadresaka amin'ny Facebook ao amin'ny Pidgin & Empathy tsy misy plugins manokana
Sary masina tsara ho an'ny lovia Pidgin
Fanitarana hampidirana Pidgin ao amin'ny Gnome-Shell
Lohahevitra tsara ho an'ny Pidgin aingam-panahy avy amin'i Adium
Ahoana ny fampidirana fampandrenesana Pidgin amin'ny fampandrenesana KDE
Ahoana ny fampiasana Bonjour amin'ny Pidgin miaraka amin'ny Arch Linux?
Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ny Facebook amin'i Pidgin
Ahoana ny fampiasana WhatsApp amin'ny Linux miaraka amin'i Pidgin
Ampidiro HipChat na ampiasao resaka HipChat avy any Pidgin
Mampiasà "Protocol" Chat Protocol amin'ny Pidgin ho an'ny Linux Mint 17 Qiana
ScudCloud: Mpanjifa miadana ho an'ny Linux.
Slack-Gitsin: Mpanjifa hampiasa Slack avy amin'ny console. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Slack-Gitsin ary:
Skype: Mpanjifa Skype ofisialy ho an'ny Linux, fitaovana ahafahanao mifampiresaka maimaim-poana.
telegrama: Fampiharana fandefasan-kafatra mifantoka amin'ny hafainganana sy fiarovana, haingana dia haingana, tsotra ary maimaim-poana izy io.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba telegrama ary:
Telegram sy Ello ho safidy azo antoka amin'ny tambajotra sosialy
Mampiasa Telegram avy amin'ny terminal
[Python] Mandefasa amin'ny tambajotra sosialy avy amin'ny Telegram.
Viber: Viber ho an'ny Linux dia mamela anao handefa hafatra maimaim-poana sy hanao antso maimaim-poana amin'ireo mpampiasa Viber hafa avy amin'ny firenena rehetra.
Whatsie: Mpanjifa chat tsy ofisialy ho an'ny WhatsApp
Franz: Mpanjifa Chat izay mamela antsika hampiditra WhatsApp, Slack, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, GroupMe, Skype, sns.
Fampiharana backup sy fanarenana data ho an'ny Ubuntu / Linux
Borg Backup: Fitaovana tsara ho an'ny backup.
Photorec: Izy io dia rindrambaiko fanarenana angona natao hamerenana ireo rakitra very, ao anatin'izany ny horonan-tsary, sary, antontan-taratasy sy rakitra avy amin'ny kapila mafy, CD-ROM, ary fakan-tsary niomerika. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Photorec ary:
Avereno mora foana ny rakitra voafafa amin'ny Photorec avy amin'ny console
Qt4-fsarchiver: Izy io dia interface for graphic ho an'ny programa fsarchiver Mamela ny fizarazarana, famerenana amin'ny laoniny, lahatahiry ary MBR / GPT. Ny programa dia ho an'ny rafitra mifototra amin'i Debian, Suse ary Fedora.
CD famonjena ny rafitra: Izy io dia kapila fanavotana GNU / Linux, azo ampiasaina ho CD-ROM na USB azo sintomina, ahafahana mitantana na manamboatra rafitra iray, mamela ihany koa ny fanarenana data. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba CD famonjena ny rafitra ary:
Navoaka ny SystemRescue CD v2.4.0
Diska fitsapana: Izy io dia rindrambaiko fanarenana data maimaimpoana mahery vaika. Natao indrindra hanampiana ny famerenana ireo fizara very sy / na hampiova ireo kapila tsy azo alefa ho kapila azo sintomina rehefa vokatry ny lozisialy diso ireo soritr'aretina ireo.
Fampiharana sy fitaovana ho an'ny fanaingoana ny birao Ubuntu / Linux
Arc Theme: Lohahevitra fisaka misy singa mangarahara
Mpandrindra fikirakirana Compiz Config: Ity tetik'asa 3D Desktop Project ity dia mitondra vokatra hita maso izay manatsara ny fanamorana ny fampiasana ny rafitra sy manome vokatra bebe kokoa.
Conky: Izy io dia mpanara-maso rafitra maivana, izay mampiseho karazana fampahalalana rehetra eo amin'ny biraonao.
Flatabulous: Ity dia lohahevitra Flat ho an'ny Ubuntu sy ireo fizarana GNome / Linux hafa mifototra amin'ny Gnome.
Lohahevitra Arc Flatabulous: Ny lohahevitra tiako indrindra amin'ny Ubuntu.
Lohahevitra Irradiance: Lohahevitra entanin'ny OSX Yosemite miorina amin'ny Radiance.
Fanitarana Gnome: Fanitarana ho an'ny birao Gnome.
Numix Icon Theme: Iray amin'ireo lohahevitra kisary tsara indrindra ho an'ny Ubuntu Linux.
Numix Theme: Lohahevitra tsara ary malaza be.
Papirus Icon Theme: Iray amin'ireo lohahevitra kisary tsara indrindra ho an'ny Ubuntu Linux.
Fitaovana fanoratana firaisam-po: Fampiharana tsy maintsy ananana ho an'ny fanamboarana ubuntu.
Lohahevitra Yosembiance: Lohahevitra Unity aingam-panahy avy amin'ny OSX Yosemite miorina amin'ny Ambiance.
Tontolo iainana desktop ho an'ny Ubuntu / Linux
havozomanitra: Ny tontolon'ny birao havozomanitra.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba havozomanitra ary:
Misy ny Cinammon 1.2, miaraka amin'ny fitaovam-pitaterana sy maro hafa
GNOME: Ny tontolon'ny birao GNOME. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba GNOME ary:
Ahoana ny fomba fanoratana rindranasa KDE sy fampiharana GNOME
HowTo: Install Arc, lohahevitra GTK tsara tarehy ao amin'ny GNOME
Kitapo Icon Elementary ao amin'ny GNOME
Nitrux OS: Icon tsara tarehy napetraka ho an'ny KDE sy GNOME
KDE: Ny tontolon'ny birao KDE. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba KDE ary:
Omeo fisehoana mitovy amin'ny KDE amin'ny fampiharana QT sy GTK anao i KDE
Mametraha vokatra vitsivitsy ao amin'ny KDE mba hisehosehoana amin'ny namanao
Emerald Icons: Ny tsara indrindra amin'ny Flattr sy ny rivotra ho an'ny KDE
Mate: Ny tontolon'ny birao VADIKO io dia ny fitohizan'ny GNOME 2. Manome tontolon'ny birao intuitive sy manintona izy io. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba VADIKO ary:
Ubuntu MATE dia efa "tsiro" ofisialin'ny Ubuntu
[HowTo] Fandinihana Debian + Programme Mate +
Ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Mate tamin'ny fitsapana an'i Debian
Unity: Ny tontolon'ny birao Unity. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Unity ary:
Ahoana ny fomba hanombohana indray ny Unity amin'ny vonjy taitra
Ny firaisana, ny miadana indrindra ao am-pianarana
Xfce: Ny tontolon'ny birao Xfce. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Xfce ary:
Whisker Menu: ampifanaraho amin'ny lohahevitra GTK ao Xfce ny fisehony
XFCE manokana: Ireo lahatsoratra mahaliana indrindra
Fitaovana fampiharana sy fampandrosoana ho an'ny Ubuntu / Linux
Android Studio: IDE ofisialy ho an'ny Android, manome fitaovana haingana indrindra amin'ny famoronana rindranasa amin'ireo fitaovana Android isan-karazany. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Android Studio ary:
Aptana: Aptana Studio dia manararaotra ny fahafahan'ny Eclipse ary mifantoka amin'ny motera fampandrosoana tranonkala matanjaka.
Atom: Mpanonta lahatsoratra tena tsara.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Atom ary:
IDE Arduino: IDE loharano misokatra izay manampy amin'ny fanoratana kaody ho an'ny Arduino.
BlueJ: Sehatra fampandrosoana maimaimpoana ho an'i Java natao ho an'ny vao manomboka, ampiasain'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao.
Kaody :: sakana: Sehatra fampandrosoana maimaimpoana ho an'ny C, C ++ ary Fortran, namboarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa azy indrindra. Natao hamboarina sy azo alamina tanteraka.
CodeLite: Loharano misokatra sy IDE miampita ho an'ny C, C ++, PHP ary Node.js.
fanakona-masoandro: IDE malaza ho an'ny Java, C / C ++ ary PHP misy fampiasa maro izy io
Fritzing: Fitaovana ho an'ny famolavolana elektronika maimaim-poana, ity hetsika ity dia mahatonga ny elektronika ho azon'ny rehetra idirana.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Fritzing ary:
Fanamboarana: fitaovana famolavolana elektronika maimaim-poana
Geany: Tonian-dahatsoratra novolavolaina tao amin'ny GTK, miaraka amin'ireo toetra mampiavaka ny tontolon'ny fampandrosoana tafiditra. Namboarina mba hanomezana IDE kely sy haingana, izay tsy miankina afa-tsy amin'ny fonosana hafa.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Geany ary:
Quick Open, plugin iray hafa ho an'i Geany
Python matanjaka any Geany
Genymotion: Izy io dia emulator Android somary feno. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Genymotion ary:
git: Izy io dia rafitra loharano maimaim-poana sy misokatra, natao hizahana haingana sy mahomby ny fanaraha-maso ny kinova ho an'ny tetikasa kely sy lehibe. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba git ary:
Manomboka tetikasa miaraka amin'i Git sy Google Code
Torolàlana haingana amin'ny fampiasana Git
Torohevitra: baiko maherin'ny 100 ho an'ny Git tokony ho fantatrao
IDI an'ny IntelliJ: IDE mahery ho an'ny JAVA
Fampivoarana: IDE loharano malalaka sy misokatra izy io, miaraka amina fampiasa maro ary azo alefa amin'ny plug-in ho an'ny C / C ++ sy ireo fiteny fandaharana hafa.
Komodo Edit: IDE loharano malalaka sy misokatra izay manohana fiteny maro. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Komodo Edit ary:
Jiro: Izy io dia tonian-dahatsoratry ny kaody farany, izay mamela ny kaody mivantana.
MariaDB: Iray amin'ireo mpizara lozisialy malaza indrindra. Namboarin'ireo mpamorona MySQL tany am-boalohany.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba MariaDB ary:
Percona TokuDB: Fampisehoana avo lenta ary volabe ao amin'ny MySQL / MariaDB ho an'ny Linux
MonoDevelop: IDE miampita sehatra ho an'ny C #, C # sy maro hafa -.
Nemiver: Izy io dia debugger C / C ++ izay tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny birao GNOME.
Oh-my-zsh: Rafitra fitantanana ny fikirakirana zsh.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Oh-my-zsh ary:
PyCharm: IDE mahery ho an'i Python
PostgreSQL: Rafitra fitahirizana loharanom-baovao mahery sy matanjaka io.
Postman: Mamorona fanampiana ho an'ny API haingana
Qt Mpamorona: Tontolo iainana mivelatra amin'ny sehatra fivelarana (IDE), natao hanamorana ny famoronana fitaovana mifandraika, interface sy mpampiasa ary fampiharana.
Bitro VCS: Izy io dia andiana fitaovana an-tsary natao hanomezana fidirana tsotra sy mivantana amin'ireo rafitra fanaraha-maso kinova.
Lahatsoratra anio: Iray amin'ireo mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra efa nataoko ary ampiasaiko izao. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Lahatsoratra anio ary:
Sublime Text 2, mpamoaka kaody tena ambony
Sublime Text 2: ny mpamoaka kaody tsara indrindra misy?
Fonenana vs SublimeText3: Iza amin'ireo no hofidina?
Swift: Izy io dia fandaharam-pianarana amin'ny ankapobeny izay namboarina tamin'ny alàlan'ny fomba maoderina amin'ny lamina fiarovana, fahombiazana ary famolavolana rindrambaiko.
Ubuntu-SDK: Ny Ubuntu SDK ofisialy. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Ubuntu-SDK ary:
Fampandrosoana fangatahana ho an'ny Ubuntu [QML]
Zsh: Vongan-tsipika mibaiko baiko mahery.
E-Book Utilities ho an'ny Ubuntu / Linux
fakan-tahaka toa: Rindrambaiko manana interface kely somary ratsy tarehy, nefa mahery amin'ny fitantanana sy fanovana ny e-boky.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba fakan-tahaka toa ary:
Caliber: programa Open Source tsara indrindra ho an'ny fitantanana E-book
Ahoana ny fomba hanovana ebook amin'ny Caliber
Evince: Mpijery antontan-taratasy amin'ny endrika antontan-taratasy maro izy. Ny tanjon'ny Evince dia ny fanoloana ireo mpijery antontan-taratasy marobe izay misy eo amin'ny birao GNOME amin'ny rindrambaiko tsotra iray.
Foxit: Foxit Reader 8.0, mpandresy loka PDF Reader.
Fbreader: Iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ny eReader. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Fbreader ary:
FBReader: mpamaky maivana ho an'ny rakitra ebook amin'ny Linux
Lucidor: Izy io dia programa amin'ny famakiana sy fitantanana boky elektronika. Lucidor dia manohana e-boky amin'ny endrika fisie EPUB sy katalaogin'ny endrika OPDS. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Lucidor ary:
Lucidor, programa hamakiana e-boky
Mpanonta MasterPDF: Izy io dia tonian-dahatsoratra PDF mety sy kanto ho an'ny Linux.
MuPDF: Mpamaky PDF maivana miaraka amin'ny mpijery XPS.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba MuPDF ary:
MuPDF: mpijery PDF haingam-pandeha sy maivana
Mpamaky PDF izay mandany 3MB fotsiny
Okular: Mpijery antontan-taratasy eran-tany novolavolain'i KDE. Okular hazo fijaliana io.
Sigil: Mpanonta e-book EPUB marobe izy io.
Mpanonta ho an'ny Ubuntu / Linux
Bluefish: Izy io dia tonian-dahatsoratra mahery vaika ho an'ny mpandahatra programa sy mpamorona tranonkala, misy safidy maro hanoratana pejy web, script ary kaody programmer. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Bluefish ary:
Azo alaina ao amin'ny Bluefish 2.2.2
Sintomy ary apetraho Bluefish 2.2.0 amin'ny Debian sy Ubuntu
Bluefish 2.2.0-2 dia tonga amin'ny fitsapana an'i Debian
Misy Bluefish 2.2.0
fononteny mahitsy: Mpanonta lahatsoratra maoderina ho an'ny famolavolana tranonkala.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba fononteny mahitsy ary:
Fefy, IDE ho an'ny fampandrosoana tranonkala izay mampanantena
Ampidiro amin'ny tanana ny bracket ao amin'ny ArchLinux
Emacs: Tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra, loharano malalaka sy loharano misokatra, azo alefa, azo ovaina ary misy endri-javatra maro hafa.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Emacs ary:
Vim sy Emacs: Mangina daholo aloha
azon'ny gedit: Izy io no mpamoaka lahatsoratra an'ny GNOME. Na dia tsotra sy mora ampiasaina aza ny tanjony, azon'ny gedit dia tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra amin'ny ankapobeny. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba azon'ny gedit ary:
Gedit… ho an'ny programmer
Kate: Izy no tonian-dahatsoratra mandroso amin'ny tetikasa KDE SC, ary raha ampitahaina amin'ny sasany amin'ireo rindrambaiko mitovy amin'izany amin'ny tontolon'ny Desktop hafa, dia mitovy amin'ny IDE, feno safidy sy fampiasa io. Nefa mitandrema, fa tonian-dahatsoratra fotsiny.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Kate ary:
Lahatsoratra anio: Iray amin'ireo mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra efa nataoko ary ampiasaiko ankehitriny.
vim: Izy dia tonian-dahatsoratra mandroso, izay mitady hanome ny herin'ny tonian-dahatsoratra 'Vi', miaraka amina endriny feno kokoa.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba vim ary:
Ny fananganana Vim farany
Fitaovana fampianarana sy fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
Baiboly Fotoana: Fampiharana fampianarana Baiboly natao tao amin'ny fivarotam-boky sabatra y Qt.
Celestia: Simulator habakabaka izy io izay mamela anao hijery ny tontolontsika amin'ny lafiny telo.
Chemtool: Programme kely hakana sary firafitry ny simika ao amin'ny Linux.
Epoptes: Izy io dia fitaovana maimaimpoana maimaimpoana ary maimaim-poana ho an'ny fitantanana laboratoara informatika ary misy fampiasa amin'ny fanaraha-maso.
Gcompris: Izy io dia fonosana rindrambaiko fanabeazana avo lenta izay ahitana hetsika maro ho an'ny ankizy 2 ka hatramin'ny 10 taona.
GNUKhata: Rindrambaiko fitantanana loharano misokatra.
Idempiere: ERP loharano misokatra, novolavolaina tamin'ny java sy ny haitao OSGI. Idempiere manana modely maro.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Idempiere ary:
Google Earth: Izy io dia programa virtoaly eran-tany, sarintany ary jeografika.
GPeriodic: Fampiharana ny latabatra maharitra ho an'ny Linux izy io.
ITalc: Fitaovana mahery vaika sy didaktika ho an'ny mpampianatra izany. Mamela anao hijerena sy hifehezana solosaina hafa amin'ny tamba-jotra amin'ny fomba isan-karazany.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ITalc ary:
iTALC: ny fomba fampiasana rindranasa maimaimpoana ao amin'ny efitrano fianaranao
KDE Edu Suite: Rindrambaiko fanabeazana maimaim-poana mifototra amin'ny teknolojia KDE.
SARY: Izy io dia rindrambaiko matematika izay manambatra ny maotera matematika matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amina interface tsara izay mahatonga azy io ho tena mora ny mamakafaka, mizaha, mahita an-tsary ary mamaha ireo olana matematika.
MatLab: Ny lampihazo MatLab nohamarinina hamahana ny olana momba ny teknika sy ny siansa. MatLab afaka mihazakazaka famakafakana ireo angona angona lehibe.
maxima: Izy io dia rafitra iray hanodinkodinana ireo hevitra an'ohatra sy isa, ao anatin'izany ny fanavahana, ny fampidirana, ny andiany Taylor, ny fanovana Laplace, ny fampitoviana mahazatra, ny rafitry ny fampitoviana tsipika, sns
Moodle: Rafitra fitantanana fampianarana ho an'ny fianarana an-tserasera izy io.
OpenEuclide: Izy io dia rindrambaiko geometry 2D.
OpenSIS: Rindrambaiko ho an'ny fitantanana sekoly.
Scratch: Izy io dia rindrambaiko iray ahafahanao mandahatra ny tantaranao, ny lalao ary ny sarimiaina ifampiresahanao, azonao atao koa ny mizara ny zavatra noforoninao tamin'ny hafa ao amin'ny fiarahamonina an-tserasera. Scratch dia fitaovana tsara ampianarana ny ankizy hanao kaody.
Stellarium: Rindrambaiko maimaim-poana ahafahan'ny olona maka tahaka ny planeta amin'ny solo-sain'izy ireo manokana.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Stellarium ary:
Tux4Kids: Tux4Kids dia mamolavola rindrambaiko avo lenta ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny tanjona hanambatra ny fahafinaretana sy ny fianarana amin'ny fonosana iray tsy hay tohaina.
Fampiharana mailaka / mailaka sy fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
evolisiona: Izy io dia fampiharana fitantanana fampahalalana manokana izay manome mailaka, tetiandro ary adiresy miasa.
Geary: Rindrambaiko mailaka natsangana ao amin'ny GNOME 3. Io dia ahafahanao mamaky sy mandefa mailaka amin'ny interface tsotra sy maoderina. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Geary ary:
Mailnag: Daemon izay manamarina ireo mpizara POP3 sy IMAP raha mila mailaka vaovao.
Thunderbird: Fampiasa mailaka maimaimpoana ity izay mora amboarina, ampanjifaina ary misy endri-javatra maro. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Thunderbird ary:
Wmail: Mpanjifa birao tsy ofisialy ho an'ny Linux avy Gmail sy Google Inbox.
Mpitantana rakitra ho an'ny Ubuntu / Linux
7zip: Esory ny zip zip. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba 7zip ary:
AngrySearch: Ahafahanao mitady amin'ny Linux, mampiseho valiny eo noho eo rehefa manoratra.
Komandy roa: Mpanafatra rakitra izy, sehatra hafa misy tontonana roa mifanila. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny Mpitarika manontolo ary manana hevitra vaovao.
Marlin: Vaovao io mpizaha rakitra ultra-jiro. Ity browser ity dia teraka niaraka tamin'ny tetikasan'ny Elementary ary natao ho tsotra, haingana ary mora ampiasaina. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Marlin ary:
Manome fotoana an'i Marlin
Apetraho amin'ny fitsapana Debian i Marlin
Marlin: safidy mahaliana an'i Nautilus
Nautilus: Izy io dia mpitantana rakitra izay natao hanarahana ny endrika sy ny fitondran-tenan'ny birao GNOME, manome ny mpampiasa fomba mora hitetezana sy hitantanana ny fisie. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Nautilus ary:
Encrypt fampahalalana avy any Nautilus amin'ny Turbo-Secure
Ahoana ny fomba ahafahana mijery ny tontonana 2 ao Nautilus
Nemo: Izy io dia ny mpitantana ny rakitra ho an'ny tontolon'ny birao kanelina.
QDirStat: Izy dia mpitantana rakitra miaraka amina interface interface izay ahafahanao mijery ireo rakitra izay mibahan-toerana bebe kokoa toerana malalaka amin'ny kapila misy antsika.
Ranger: Mpikaroka rakitra izay tafiditra tsara ao anatin'ny tontolon'ny birao rehetra. Ranger mifototra amin'ny lahatsoratra ary mandroso amin'ny Python .
Synapse: Ny mpandefa fampiharana tsara indrindra amin'ny Linux. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Synapse ary:
Thunar: Ity no mpitantana fisie default ho an'ny Xfce 4.6. Natao ho haingana sy mora ampiasaina izy io.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Thunar ary:
Ampidiro ny Thunar 1.5.1 miaraka amin'ny kiheba amin'ny Xubuntu 12.10 na 12.04
Izay mbola tsy nananan'i Thunar
Lalao ho an'ny Ubuntu / Linux
0 AD: Ity dia tetikady tetikady maharitra sy maimaim-poana ho an'ny GNU / Linux napetraka tamin'ny ady taloha sy mitovy amin'ny lalao hafa toa Age of Empires, Fanjakana tany o Age ny angano. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba 0 AD ary:
0 AD (Lalao Strategy amin'ny Linux)
0 AD Alpha 2, nihatsara ny raharaha
0 AD: klone maimaimpoana amin'ny Age of Empires
0 AD mangataka fanampiana
Sivilizasiona5: Ny sivilizasian'i Sid Meier dia ekena ho iray amin'ireo franchise manana paikady tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
menarana: Izy io dia loharano misokatra sy lalao multiplatform mamela anao hilalao karatra amin'ny tambajotra.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba menarana ary:
Play Magic: ny famoriam-bola amin'ny PC-nao, maimaim-poana amin'ny Cockatrice
Desura: Izy io dia serivisy fizarana dizitaly entin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny mpilalao, mametraka ny lalao tsara indrindra, mods ary atiny azo sintomina avy amin'ny mpamorona eo am-pelatanan'izy ireo, vonona ny hividy sy hilalao. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Desura ary:
Desura dia OpenSource ankehitriny
Ahoana ny fametrahana Desura (Steam for Linux)
GBrainy: Lalao tezera ati-doha izy io, ahafahan'ny mpilalao miala voly ary mitazona ny ati-dohan'izy ireo voaofana.
Minecraft: Lalao momba ny fametrahana sakana sy traikefa nahafinaritra isan-karazany izy io. Mikaroha tontolo voaforona kisendrasendra ary manamboara zavatra tsy mampino manomboka amin'ny trano tsotra indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra amin'ny trano mimanda. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Minecraft ary:
[Lalao Linux: 3] Minecraft
Mametraka Minecraft avy amin'ny PPA
PlayOnLinux: Milalaova lalao Windows amin'ny Linux.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba PlayOnLinux ary:
PlayOnLinux na ny fomba filalaovana ny lalao Windows tianao amin'ny Linux
Simutrans: Simulator fitaterana loharano maimaimpoana sy malalaka io.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Simutrans ary:
Simutrans: lalao style Tycoon Transport
Steam: Sehatra filalaovana mahavariana izy io, izay mamela ny fanatanterahana lalao maro.
Divay (Acronym for "Ny divay dia tsy emulator") dia sosona mifanentana afaka mihazakazaka fampiharana Windows amin'ny rafitra fiasa isan-karazany.
Xonotic: Lava izany mpitifitra voalohany, haingam-pandeha, izay mitondra antsika any amin'ny fotoanan'ny sehatry ny fps. Izy io dia manana maodin-dalao mpilalao tokana, fa ny tanjany dia ny maody multiplayer izay entanin'ny Unreal Tournament sy Quake.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Xonotic ary:
Xonotic, lalao multiplayer tsara indrindra ho an'ny GNU / Linux
Fampiharana sary sy fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
AfterShot: Safidy matanjaka amin'ny Adobe Photoshop!
taretra: Fampiharana tena tsotra ho an'ny birao GNOME ahafahanao mamorona karazana loko maro manomboka amin'ny loko iray.
blender: Izy io dia fitaovana maimaim-poana sy misokatra hamoronana habaka 3D, sary mihetsika ary sary. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba blender ary:
Blender 2.76b: Raha resaka 3D
Kitapo mitambatra amin'ny Blender (Vol. I)
Akanjo palitao: sarimihetsika mihetsika Arzantina vita amin'ny Blender
Ahoana ny fomba famoronana 3D Spaceship miaraka amin'ny Blender sy SpaceshipGenerator
Cinepaint: Rindrambaiko loharano misokatra ho an'ny fandokoana lalina
Darktable: Fampiharana loharano misokatra izy io, miaraka amin'ny workflow sary sy developer RAW
Digikam: Izy io dia fampiharana fitantanana sary nomerika mandroso ho an'ny Linux. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Digikam ary:
DigiKam: Ataovy kilasy sy alamino ny sarinao ao amin'ny KDE
Photoxx: Izy io dia programa fanovana sary maimaimpoana maimaimpoana sy programa fitantanana faktiora.
GIMP: Izy io dia programa fizarana maimaimpoana ho an'ny asa toy ny famerenana sary, ny famoronana sary ary ny famoronana sary
Hugin: Safidy multiplatform maimaimpoana amin'ny famoronana sary panoramika ary vahaolana avo lenta, ankoatry ny fananana fitaovana tsy misy farany ho an'ny fanovana sary. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Hugin ary:
Inkscape: Izy io dia mpamoaka sary vongotra maroloko multiplatform, miaraka amina karazana asa maro izay mahatonga ny Inkscape ho fitaovana matanjaka ary izany rehetra izany dia manana lisansa GPL. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Inkscape ary:
Inkscape + KDE: ovao ny sary masina fantsonao
Loharano hianarana hiasa amin'ny Inkscape
tsaoka: Rindrambaiko loharano misokatra ho an'ny mpanakanto nomerika, mpanao hosodoko ary sary. Afaka mamaky bebe kokoa momba izany ianao tsaoka ary:
Krita 2.8 miaraka amin'ny fanohanana tsara kokoa ny Takelaka
Krita dia finalist amin'ny Open Source Awards 2011
Manampy amin'ny fanafainganana ny fampandrosoana an'i Krita
Luminance HDR: Izy io dia rindrambaiko malalaka misokatra miaraka amina sehatr'asa mpampiasa sary izay mikendry ny hanome onjam-piasa ho an'ny sary HDR.
Ojo: Mpijery sary haingana sy tsara tarehy.
OpenShot: Tonian-dahatsary horonantsary be mpampiasa sy manankarena amin'ny Linux ho azy ity. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba OpenShot ary:
Pinta: Pinta dia rindrambaiko malalaka misokatra hamoahana sary sy fanovana sary.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Pinta ary:
Azo Pint 1.2
Pitivi: Tonian-dahatsary maimaimpoana miaraka amina interface tsara amin'ny mpampiasa mahafinaritra sy intuitive, base code madio ary vondrom-piarahamonina mahafinaritra.
famirapiratany: Andiam-pandaharana ho an'ny famakafakana sy ny sary an-tsaina ny jiro amin'ny endrika.
RawTherapee: Fampiharana fanovana sary tsara nefa tsy dia fantatra.
Shotwell: Mpandrindra sary ho an'ny GNOME 3 izy.
Stopmotion: Izy io dia rindrambaiko maimaimpoana maimaimpoana amin'ny famoronana sary mihetsika. Manampy anao hisambotra sy hanitsy ireo sary mihetsika ary hanondrana azy ireo ho rakitra iray ihany.
Xara Extreme: Izy io dia programa maherin'ny tanjon'ny sary.
Fampiharana sy fitaovana amin'ny Internet ho an'ny Ubuntu / Linux
Anatine: Mpanjifa birao ho an'ny Twitter miaraka amina fanamboarana maro.
Nahery Fo: Izy io dia mpizaha birao tsara sy haingana ho an'ny MacOS, Windows ary Linux.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba Nahery Fo ary:
Chrome: Iray amin'ireo mpizaha tranonkala malaza indrindra miaraka amin'ny plugins / rindranasa marobe.
chrome: Tetikasa loharanom-baovao misokatra izy io izay mikendry ny hanangana tranokala mirindra sy azo antoka ary haingana indrindra ho an'ny mpampiasa rehetra.
Firefox: Iray amin'ireo mpizaha tranonkala malaza indrindra miaraka amin'ny plugins / rindranasa marobe.
Tor: Izy io dia tranokala maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana ary manampy anao hiaro amin'ny an-tsokosoko ny fifamoivoizana an-tranonkala, endrika fanaraha-maso mandrahona ny fahalalahanao sy ny fiainanao manokana.
Vivaldi: Browser vaovao sy mandroso miaraka amina fanamboarana be dia be.
Yandex: Browser haingana sy mahomby.
Fampiharana sy fitaovana fampitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
Ambient Noise: Fampiharana ahafahanao mifantoka amin'ny famokaranao, noho ny mozika manodidina anao.
Autokey: Izy io dia rindrambaiko automatique amin'ny desktop ho an'ny Linux, mamela anao hitantana ny script sy ny andian-teny ary hanome ny fanafohezana sy ny hotkey ho an'ny tsirairay amin'izy ireo
Pads Fanamarihana harona: Ity rindrambaiko multigpose ity dia manampy amin'ny fandraisana mora foana ny karazana naoty rehetra.
famirapiratana: Famantarana hazavana ho an'ny ubuntu.
Speedcrunch - calculatera avo lenta.
California: Fampiharana Kalandrie iray tena feno izay mampiasa ny fiteny voajanahary mba hamoronana hetsika.
CopyQ: Mpitantana clipboard mandroso miaraka amina fanovana sy fanoratana izy.
F.lux: Amboary ho azy ny efijery solosaina mba hifanaraka amin'ny jiro.
Rakibolana Gnome: Rakibolana matanjaka ho an'ny GNOME.
Ataovy: Fampiharana famokarana tsotra sy kanto ity, izay manolotra lisitry ny raha hatao, dia atambatra amin'ny timer mba hitehirizanao ny lahasa amin'izao fotoana izao.
Ny zava-drehetra: Mpitantana lisitry ny zavatra tokony hatao tsotra.
Ny famantarana ny toetrandro: Tondro toetr'andro ho an'ny Ubuntu.
Fanamarihana: Fampiharana fandraisana an-tsoratra tsotra amin'ny Linux.
Notepadqq: Izy io dia fanoloana ny mpanonta fanamarihana Notepad ++.
hazo fisaka: Plank dia natao ho fantsona fampiharana tsotra indrindra eto ambonin'ny planeta.
PomoDoneApp: Ity no fomba mora indrindra hanarahana ny fizotran'ny asanao amin'ny alàlan'ny teknikan'ny Pomodoro, eo ambonin'ny serivisy fitantanan-draharaha ankehitriny.
Papyrus: Izy io dia manager manager hafa izay mifantoka amin'ny fiarovana, interface tsara kokoa an'ny mpampiasa. Papyrus dia manandrana manome interface tsara ho an'ny mpampiasa ho an'ny mpampiasa.
Noti farany: Famantarana fampandrenesana vao tsy ela akory izay.
Hafaingana radiala: Fitaovana ahafahanao manitsy ny jiro amin'ny efijeryo arakaraka ny mari-pana, ny fotoana ary ny toetrandro manodidina anao. Izany dia afaka manampy ny masonao tsy handratra raha miasa eo alohan'ny efijery amin'ny alina ianao.
Shutter: Izy io dia programa fisamborana efijery misy fampiasa fanampiny.
Simplenote: Fampiharana iray handraisana naoty avy amin'ny sehatra maro samihafa. Mpifaninana amin'i Evernote izy io.
Springseed: Fampiharana tsotra sy tsara ho an'ny fandraisana an-tsoratra isan'andro.
Stickynote: Miraikitra amin'ny birao tianao.
All.txt: Mpamoaka lahatsoratra tena mahay mitantana sy manoratra asa isan'andro.
Todoist: Mpanjifa Todoist tsy ofisialy, sehatra fitantanana asa, interface tsara amin'ny mpampiasa ary manana fiasa premium tsy voatery atao.
Aza esorina aho: Mampahafantatra rehefa vita ny baiko maharitra.
Xmind: Fitaovana fanaovana sarintany saina.
WPS Office: Iray amin'ireo efitrano fangatahana birao tsara indrindra ho an'ny Linux.
Zim: Mpanonta lahatsoratra an-tsary ampiasaina hitazomana ny fanangonana pejy wiki, mety amin'ny antontan-taratasy. Voatahiry anaty rakitra an-tsoratra tsotra mba hifehezana ny kinova mora.
Fampitaovana sy fitaovana fiarovana ho an'ny Ubuntu / Linux
ClamAV: Masinina antivirus misokatra ho an'ny fitiliana ireo Trojan, virus, malware ary fandrahonana manimba hafa.
GnuPG: Izy io dia ahafahanao manafina sy manao sonia ny angon-drakitrao sy ny hafatrao, manana rafitra fitantanana fanalahidy marobe izy io, ary koa modules fidirana ho an'ny karazana lahatahiry lahatahiry ho an'ny daholobe.
Gufw: Iray amin'ireo firewall mora indrindra eto amin'ny tontolon'ny Linux.
OpenSSH: Mpizara sy mpanjifa OpenSSH Secure Shell
soavalin-dranomasina: Fandraisana GNOME ho an'i GnuPG
Tcpdump: Fitaovana fisamborana TCP sy Debugging
Fampiharana sy fitaovana hizarana rakitra ao amin'ny Ubuntu / Linux
CrossFTP: Fitaovana iray izay manamora ny fikirakirana ireo asa mifandraika amin'ny FTP.
D-lan: LAN iray hizarana rakitra.
safo-drano: Izy io dia rindrambaiko maimaim-poana, mpanjifa BitTorrent maivana amin'ny sehatra sehatra.
Dropbox: Serivisy maimaimpoana ahafahanao maka ny sarinao, ny antontan-taratasy ary ny horonan-tsary na aiza na aiza ary mizara azy ireo mora foana.
Meiga: Fitaovana iray ahafahana mizara lahatahiry eo an-toerana voafantina amin'ny alàlan'ny tranonkala.
ownCloud: Ny tanjon'ny ownCloud dia ny hanome anao fidirana amin'ireo rakitrao na aiza na aiza misy anao
Quazaa: Sehatra iraisan'ny mpiray tambajotra (P2P) multi-tamba-jotra hizarana rakitra eo amin'ny mpanjifa.
PushBullet: Ampifandraiso ireo fitaovanao, hahatonga azy ireo hahatsapa ho iray.
qBittorent: Ny tetik'asa qBittorrent dia mikendry ny hanome safidy rindrambaiko maimaim-poana amin'ny uTorrent.
SpiderOak- Fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy ho an'ireo orinasa sy ekipa tsy mahalala tsiambaratelo
Syncthing: Manolo ny rahona patanty sy ny serivisy fampandrenesana amin'ny zavatra misokatra, atokisana ary itsinjaram-pahefana.
TeamViewer: Rindrambaiko fanaraha-maso lavitra / fidirana lavitra an'ny PC, maimaimpoana amin'ny fampiasana anao manokana.
Transmission: Mpanjohy torrent tsotra, maivana ary marobe.
uGet: Mpitantana fampidinana tsara indrindra ho an'ny Linux.
Terminal ho an'ny Ubuntu / Linux
GnomeTerminal: Emulator terminal efa nipetraka efa napetraka mialoha eo amin'ny tontolon'ny Linux
Guake: Fantsona ambony ambany ho an'i Gnome
Konsole: Ny terminal tsara indrindra amin'ny birao KDE.
Rxvt: Emulator terminal ho an'ny X11, soloina malaza ho an'ny fenitra 'xterm'.
Rxvt Unicode: Izy io dia fork an'ny emulator terminal malaza indrindra.
Terminator: Io no emulator terminal mahery indrindra amin'ny Linux, feno endri-javatra io.
Termite: Emulator terminal tsotra miorina amin'ny tranomboky VTE, azo zahana amin'ny alàlan'ny Lua.
Fitaovana ho an'ny Ubuntu / Linux
Actionaz: Fitaovana ho an'ny asa mandeha ho azy ho an'ny Ubuntu / Linux
Bleach bit: Vahao haingana ny habaka kapila ary arovy ny fiainanao manokana. Cache maimaimpoana, hamafa ny cookies, hamafana ny tantara, hamafana fisie vetivety, hamafana ny firaketana ary maro hafa ...
kafeinina: Sakano ny ubuntu tsy hanidy AUTOMATICALLY.
Clonezilla: dia fizarazaran-tsary sy fandaharana sary / fanaovana klona mitovy amin'ny True Image® na Norton Ghost®.
Easystroke: dia fampiharana fankasitrahana fihetsika ho an'ny X11.
Enpass: manamora ny fiainanao amin'ny fitantanana milamina ny teny miafinao sy ny fampahalalana manan-danja hafa.
Convertall: Avadiho ny singa rehetra.
Sarintany GD: Fitaovana iray handinihana ny fampiasana disk.
Gnormalize: Mpanova feo
GParted: Fitaovana fisarahana kapila ho an'ny Ubuntu / Linux.
GRadio: Rindrambaiko radio ho an'ny linux ubuntu -.
Remotra: Mpanova horonantsary.
KeePass: Mpitantana tenimiafina Windows, miaraka amin'ny fanohanana kely eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny alàlan'ny Mono.
KeePassX: Mpandrindra tenimiafina marobe.
ImageMagik: Izy io dia andiana zotram-pifandraisana ho fanovana sy fiasana amin'ny sary.
LastPass: Sehatra fitantanana teny miafina.
Powertop: Diagnostika ny olan'ny fanjifana herinaratra.
Press Audio: Ampitomboy ny Linux Audio amin'ny mombamomba anao manokana.
Peazip: Fampiasana hamoahana ny rakitra voageja
Psensor: Fanaraha-maso ny mari-pahaizana momba ny hafanana sary ho an'ny Linux.
Mahavariana: Mpanonta Markdown tsara indrindra amin'ny Ubuntu / Linux.
Remmina: Fitaovana fitantanana lavitra ho an'ny Linux sy Unix hafa.
Systemload: Asehoy ny fampidiran-drakitra ao amin'ny bara fisoratana anarana.
Synaptic: Izy io dia programa misy sary ho an'ny fitantanana fonosana mety.
TLP: Optimize bateria Linux.
Isan-karazany: Izy io dia mpamadika rindrambaiko misokatra ho an'ny Linux, feno fonosana lehibe, nefa maivana ary mora ampiasaina.
VirtualBox: Izy io dia virtoaly tanjona ankapobeny tanteraka ho an'ny hardware x86, mpizara kendrena, birao ary fampiasana ampiasana.
Xtreme Download Manager: Mpandrindra fampidinana tsara miaraka amina mpampiasa interface tsara ho an'ny Linux.
Fanovana: Ovao ho azy ny rindrina.
Fitaovana horonan-tsary sy fampiharana ho an'ny Ubuntu / Linux
Bomi Player: Mpilalao haino aman-jery matanjaka sy mora ampiasaina.
Kodi: Rindrambaiko foibe haino aman-jery maimaim-poana sy misokatra (GPL) amin'ny filalaovana horonantsary, mozika, sary, lalao ary maro hafa.
MPlayer: Izy io dia mpilalao sarimihetsika mandeha amin'ny rafitra maro, milalao endrika audio sy video rehetra izy.
SMPlayer: Media Player miaraka amina codec anatiny. Milalao ny endrika horonantsary sy horonam-peo rehetra.
SVP: Izy io dia ahafahanao mijery izay horonan-tsary amin'ny solo-sainao amin'ny alàlan'ny fampiasana interpolation frame, satria azo jerena amin'ny fahitalavitra sy projecteur avo lenta.
VLC: Izy io dia mpilalao haino aman-jery loharano maimaimpoana sy misokatra ary milalao antontan-taratasy haino aman-jery ary koa DVD, Audio CD, VCDs, ary protokoloka mikoriana isan-karazany.
Mpitantana varavarankely ho an'ny Ubuntu / Linux
2bwm: Mpitantana varavarankely mitsingevana haingana.
awesome: Mpitantana varavarankely azo fehezina be.
Bspwm: Mpitantana varavarankely mifototra amin'ny habaka fisarahana roa.
DWM: Mpitantana varavarankely mavitrika ho an'i X.
Fluxbox: Mpitantana varavarankely maivana sy azo ovaina.
Herbstluftwm: Mpitantana varavarankely mozika Manual ho an'ny X.
i3: Mpitantana varavarankely mahery vaika nohatsaraina.
Openbox: Mpitantana varavarankely X11 azo ovaina sy maivana be.
xmonad: Tile mpitantana varavarankely X11 voasoratra ao amin'ny Haskell.
Fampiharana sy fitaovana hafa ho an'ny Ubuntu / Linux
Fail2ban: Mamela ny fisavana rakitra (ohatra / var / log / apache / error_log) sy ny fandrarana ny adiresy IP izay mampiseho fambara lozisialy - tsy fahombiazan'ny teny miafina loatra, mitady ho marefo sns.
GrubCustomizer: Izy io dia mpamatsy sary hanamafisana ny fikirana grub2 / Burg sy menuentries.
Mycroft: AI ho an'ny rehetra
Miorina amin'ity lisitra manaitra ity Awesome-Ubuntu-Linux de Luong Vo Tran Thanh, izay nahavita asa lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Lisitr'ireo fampiharana sy fitaovana mahavariana ho an'ny Ubuntu / Linux
Lahatsoratra tsara tokoa, fandraisana anjara tsara !!, efa notehiriziko am-paosy izany rehefa tonga any an-trano aho hanandrana fitaovana sasany ho an'ny ubuntu
Ricardo Rafael Rodriguez Reali dia hoy izy:
Ho an'ny raki-peo, omeko ihany koa ny Nuvola Player.
Valiny tamin'i Ricardo Rafael Rodriguez Reali
Renso dia hoy izy:
Tsara ny lisitra ary hovakiako manontolo.
Misy zavatra ao anatiko milaza amiko fa tsy eo ireo sary, saingy tsy tokony hanelingelina ahy izany, saingy mbola misy ihany.
Valio i Renso
gergger dia hoy izy:
tsara namana namana misaotra
Mamaly an'i gergger
helena llanos palomo dia hoy izy:
Tsy mahita fomba hametrahana tarball gz aho
Mamaly an'i helena llanos palomo
DuckDominguez dia hoy izy:
Valiny amin'i PatoDominguez
hugodipu dia hoy izy:
Fitaovana tena tsara sy be dia be izay mandany fotoana hampiasana, misaotra ary miarahaba ireo mpitantana anao. asa tsara !!
Mamaly an'i hugodipu